MAXAY YIHIIN SIFOOYINKA TARANKA LO'DA EE LO'DA EE LINDA - BEERAHA DIGAAGA
Maanta, badi hilibka dukaamada ku jira ayaa dadka siinaya fursad aan ku fekerin inay ku beeri karaan doofaarkooda, digaagga, ducklings iyo berriga.
In tuulooyinka iyo ma aha oo kaliya beeraha iyo farsamayaasha xoolaha weli hayn beerta, ma aha oo kaliya helitaanka ukunta ama caano, laakiin sidoo kale hilibka.
Ka dib, waxa fiican in la hubiyo in xayawaanka aan la siinin antibiotics miisaanka korodhka, laakiin kaliya firileyda, cawska iyo khudaarta cusub.
Taasi waa sababta ay dadku u iibsadaan chicks berrin badan.
Laascaanyo caan ah oo caan ah ayaa jilicsan Linda. Waa maxay sababta? Dhammaan xaqiiqooyinka waxaad ka heli kartaa buuggan.
Geese of Linda mid ka mid ah kooxda fervently iyo waa midka ugu caansan ee wareegga of gesevodov.
Kala duwanaantaas waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay tan ugu fiican adduunka iyadoo ay ugu wacan tahay kala duwanaansho iyo mudnaanta.
Berrigaas ayaa lagu soo raray gobolka Nizhny Novgorod, waxaana la ansixiyey 1994. Marka hore, wakiillada noocaan ah waxaa loogu yeeray geedka Gorky.
Tani waxa la helay iyadoo la soo gooyay noocyo kala duwan oo ah berriga, kuwaas oo ah Shiinaha, Adler, Solnechnogorsk iyo degaanka caadiga ah.
Dheeraad ah, Linda breed, si loo wanaajiyo sifooyinkaas, taas oo ah, in la kordhiyo heerka miisaan korodhka, miisaanka laftiisa, iyo sidoo kale si loo hagaajiyo tayada baalasha iyo hoos, waxaa la gooyay berriga Arzamas iyo Naadiga Landsky. Later mar kale Lindov ayaa midba midka kale ku duuban.
Beertu waxay u jajabisay Linda oo la furay waayo waa la gowracay waa caleemaha hilibka.
Miisaanka shimbirku wuxuu si toos ah ugu xiran yahay cuntadiisa - qiyaasta shakhsiga qaangaarka ah ayaa gaari kara ilaa 9 kg, taas oo ah tilmaame aad u sareeya miisaan korodh ah.
Mawduucyada berrigaas waa xasilooni, ma duulaan, ha la dagaallamin xayawaanka kale, si degan u dhaqma mugdiga.
Dhibaatada kaliya ayaa ah shimbiruhu waxay sameeyaan buuq badangaar ahaan marka ay noqoto xayawaan weyn. Laakiin haddii ay yihiin kuwo duurjoog ah, taasi waxay ka dhigan tahay in berriga ay caafimaad qabaan oo dareemayaan wanaag.
Berrigaasi waa mid aan la qabin marka loo eego xaaladaha cimilada. Xitaa haddii heerkulka dariiqa uu ku dhaco darajada -30 C, ka dibna daaqada, oo aan jirin wax qabyo ah, shimbiruhu waxay noqon doonaan kuwo raaxo leh.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan sababaha jirro ee berriga.
Geedka Linda waxaa loo tixgeliyaa caleemaha sare ee hilibka ee Russia, Poland, Ukraine iyo Moldova iyo wadamada kale ee yurub. Waa maxay sababta Waayo, shimbirrahan faro badan bay leeyihiin. Tusaale ahaan:
Heerarka sare ee horumarka
Baaskiilada caadiga ah ee 2 ilaa 3 bilood ayaa laga heli karaa 2 ilaa 4 kg oo miisaankeedu yahay, 5 biloodna culeyska shimbir ayaa gaari kara calaamadda 4 - 5.5 kg. Geedka Linda wuxuu ku kici karaa qiyaastii 2 jeer miisaankiisa oo ka badan kan kale.
Haddii nidaamka quudinta la arko, shimbirta da'doodu tahay 2-3 bilood waxay miisaankeedu noqonkartaa 3.5-4 kg, da'da 5 bilood bilaa miisaankeedu wuxuu noqon karaa 7 kg.
Waxaa la yaab leh in 1 sano bacaha this heli karaan 9-11 kg miisaanka. Taasi waa sababta taranta bacaha this jilicsan waa mid faa'iido leh ganacsiga. Si joogta ah, zootechnka hiwaayadda ee kor u qaadaya shimbiraha ujeeda ujeeddo ganacsi ah waxay kugajiraan 30% ama kabadan tan kaliya oo kaliya.
Hilibka lo'da Linda waa mid aad u caan ah suuqa sababtoo ah tayada sare iyo dhadhanka fiican.
Macaamiilku wuxuu ku qanacsan yahay hilibkan sababtoo ah qaabka jilicsan iyo jilicsan, caraf wanaagsan. Xitaa haddii aan tixgelinno hilibka ee foomka la dhalaaliyay, waxa wali ah mid tayo fiican leh oo tayo sare leh. Tani waa sabab kale oo ah sababta taranta ee berriga kuwanu leeyahay faa'iido badan.
Geese ka mid ah noocyada qaar ee la soo saaray ee Europe ma awoodaan inay u adkeeyaan heerkulka hoose, si dhakhso ah u noqdaan xanuunsan.
Lindov's geeseey waxaa laga soo shubay naasaha, taas oo ah, si ka duwan, waxay uqalmeen inay barafoobaan. Thanks to this, shimbiraha kuwaas la karin karaa xataa xitaa waqooyiga, halkaas oo xilliga qaboobaha heerkulka aad u hooseeya ay u socon kartaa muddo aad u dheer.
Waxa ugu muhiimsan waa in shimbirta si habboon loo ilaaliyo, oo ah inay ka hortagaan qorshaha qolka berriga ku nool. Haddii aad guriga u diiriso sida ugu macquulsan, berriga Linda ma xitaa miisaanka luminayo jiilaalka.
Heerarka wax soo saarka beeraha sare
Geese of Linda jinsiga ma aha, by dabiiciga, layers, laakiin waxay weli soo saaraan ukunta ka badan noocyada kale ee berriga kale. Inta lagu jiro sanadka waxaad heli kartaa 55 - 65 iyo ukumo badan.
Iyada oo nafaqada wanaagsan, helitaanka cagaarka cuntada, iyo sidoo kale waxyaabaha dheeraadka ah ee ku jira kalsiyumka iyo waxyaabo kale oo muhiim ah, haweenku waxay siin kartaa 1 ukumo maalin kasta guga.
Miisaanka hal ukun wuxuu gaari karaa 200 g, dhadhankiisu waa mid aad u fiican, taasoo ka dhigaysa ukumo goose aad u jecel kubadaha.
Dabeecada xasaasiga ah
Shimbiraha buuggani ma keenaan dhibaato badan mulkiilayaashooda. Waxay si tartiib tartiib ah u socdaan, ma siidaayaan si qaylo dheer, waxay ku dagaalamaan gudaha adhiga iyo shimbiraha intiisa kale ee deyrka dhaqaalaha.
Waxay inta badan ku yaallaan meel qorrax leh oo ku dhow biyaha, ama waxay raadinayaan cunto ku wareegsan wareegga wareegga socodka.
Heerka ugu sareeya ee badbaadada dhalinyarada
Marka laga helo xayawaanka madaxbannaan ee goslings ee qaboojiyeyaasha, inta badan ukumaha oo dhan waa in laga soo qaato Lindovsky dalxiis. Ku dhawaad ​​95% ukumaha bacahaaga ku jiifan doono ayaa la bacarin doonaa, sidaa darteed chicks waa laga qaadi karaa iyaga.
Dhammaan ukumaha Linda, qiyaastii 90% waxay noqon doonaan baasad yar, 85-90% waxay ku noolaan doonaan qaangaadhka.
Goslings waxay u adkeysanayaan cudurrada, qiyaastii ma xanuunsadaan. Laga bilaabo laba toddobaad ee da'da, waxay mar horeba la cuni karaa raashin buuxda leh, oo la siiyaa bareebaha dadka waaweyn.
Beerista ganacsiga ee berriga ee Linda ayaa u jilicsanaa faa'iidada faa'idada leh waxay gaari kartaa qiyaastii 200% 1 xilli oo leh daryeel habboon iyo dayactir shimbiraha. Kaydinta waa in la yareeyo kharashka quudinta, maaddaama ay bislaantu cuni karaan wax kasta oo aad siiso.
Sida cilladaha, ka badan muddada dheer ee taranka iyo dhiig-miirashada shimbiraha, badi barkada ayaa la tirtiray. Hase yeeshee, suurtagal ma ahayn in la "burburo" sifooyinka qaarkood.
Xasaasiyadda hoose ee loo yaqaan "hymenolepiasis"
Cudurkani wuxuu saameeyaa shimbiraha biyaha fadhiya muddo dheer. Geese wuxuu noqon karaa mid si weyn u faafa marka ugu horreysa noloshooda, marka difaacida habka caadiga ah ee xayawaannada biyaha wali aan weli ku filnayn horumarinta.
Kalluunka, xayawaanka qolofleyda, iyo algae xitaa waxay keeni kartaa shimbirta inay noqoto ciriiri, waxay bilaabi doontaa casiraad, iyo caloosha ayaa hoos u dhici doona. Si loo ilaaliyo berriga marka hore, waxay u baahan yihiin in si tartiib ah loo barto socodka biyaha socda.
In cuntada aad u baahan tahay inaad ku darto algae yar, oo kaliya ka dibna ku siin kalluunka yaryar. Alaabooyinkan waa inaysan qaadanin wax ka badan 10% ee wadarta guud ee digaagga.
Iyada oo bilawga guga, berriga linda Linda waxay la il daran yihiin beriberi oo aan firfircooneyn. Sawirkan waxaa badanaa lagu arkaa Maarso, tan iyo shimbiraha oo aan waligeed ku socon hawada cusub xilliga jiilaalka oo waxay cuneen cunto isku mid ah.
Laakiin dhibaatadan waa mid la xalin karo. Xaaladaha calaamadaha noocan oo kale ah, bacaha waxay u baahan yihiin in lagu quudiyo cagaarka, iyo boodhka biyaha si loogu daro fitamiinada dheellitirka ah ee magdhow u ah la'aanta maaddooyinka lagama maarmaanka ah. Waxa lagu talinayaa in la siiyo shimbiraha khudaarta ee la goostay tan iyo dayrta. Tani waxay kordhin doontaa dulqaadkii cadaadiska ee shimbiraha.
Baahida loo qabo helitaanka biyaha iyo socodka wanaagsan
Marka laga hadlayo kobcinta xirfadlaha ee berriga ee hargaha, waa in la siiyo biyo, taas oo ah, in ay sameyso kayd yar oo iyaga u gaar ah, ama ku socota qulqul ama wabi.
Haddii aan la sameynin, hoos u ma noqon doono mid aad u qiimo badan, iyo nidaamka difaaca ee berriga ayaa xanuunsan doona.
Dhibaatooyinkaasi waa kuwo aan la ogaan karin haddii berriga si habboon loo quudiyo oo si taxaddar leh u raacaan isbedelka xaaladda. Jiilaalka ka dib, waxaa lagugula talinayaa inaad wacdo dhakhtar xoolaade ah oo baadha shimbiraha iyo in la soo gabagabeeyo baahida fitamiinada.
Arrinta xannaaneynta, berriga Linda ma aha mid picky ah. Waxaa lagama maarmaan ah in ay ku jiraan iyaga iyo sidoo kale wakiilada shimbirkan.
Marka laga hadlayo la'aanta qoraxda, taas oo ah, xilliga qaboobaha, shimbiraha ayaa u baahan doona in lagu hayo iftiin macmal ah.
Dhererka wadarta iftiinka "muddada" waa in uu ahaado 12 - 13 saac maalintiiba. Waad quudin kartaa shimbirahaas sida firileyda, iyo adigoon la jajabin, iyo cunto karis, taas oo ah, qashinka cuntada laga soo qaado khudaarta.
Dalagyada cawska iyo cawska waa ineey joogaan cunnooyinka shimbiraha markasta oo ay jiraan fursado noocaas ah. Xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad bixiso dhadhan qaas ah oo Linda ah oo ay ku jiraan fitamiino iyo walxo raad raac.
Jawaabta Linda ee Linda wuxuu kuu noqon doonaa "naf-badbaadiye" haddii aad go'aansato inaad shimbirahaas u iibiso.
Xaqiiqdii, sannado badan, noocaan ayaa ku guuleystay qalbiga Macaamilka wuxuuna sii wadaa inuu hanto astaanta ilaa maanta.